Home News Shiikh shariif oo Talooyin siiyay Dowlada Farmaajo!!
Shiikh shariif oo Talooyin siiyay Dowlada Farmaajo!!
Somalia's President Sheikh Sharif Ahmed addresses a news conference inside the presidential palace in the capital Mogadishu, August 4, 2009. REUTERS/Ismail Taxta (SOMALIA POLITICS CONFLICT)
Madaxweynihii ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo kulamo kala duwan ka wadda Magaalada Garowe ayaa Khudbad u jeediyay qaar ka mid ah ardayda waxka barata Magaalada Garowe Jaamacaddaha ku yaalla.
Shariif Sheekh waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay maanta ka dhaqaaqdo meesha ay joogto, islamarkaana doorasho qof iyo Cod ah lagu dadaallo in lagu qabto dalka.
Waxaa uu ugu baaqay dhalinyaradda in ay ku biiraan Xisbiyadda Siyaasadda , maadaama dalka uu galaayo hanaanka Xisbiyadda badan.
Shariif Sheekh Axmed ayaa ku baaqay in dadaallo badan lagu bixiyo in aysan burburin dowladnimadda Soomaaliya oo dhibaato badan laga soo maray, islamarkaana xilliyo kala duwan heerar kala duwan soo gaartay.